Ngokuzenzekelayo ukuvavanywa kunye nokuSebenziswa kweNkqubo yakho yeSelfowni ngeApplause | Martech Zone
Uvavanyo oluzenzekelayo oluvela kwiApplause Ngumnikelo opheleleyo wenkonzo oqinisekisa ukuba iiapps zakho zeselfowuni kunye newebhu ziziphatha ngokungaguquguqukiyo ukusuka kolunye ulwakhiwo ukuya kolandelayo. Ndihlala ndixelela abantu ukuba ukuba uyila okanye uphuhlisa nantoni na kwaye ubuza ingxelo, uza kufumana ingxelo engeyomfuneko engekho mgangathweni okanye kubungakanani. Ukucela impendulo kumntu othile kufana nokubuza, "Ngaba unokufumana into engalunganga ngale nto?" kunye nokuvavanywa komsebenzisi kuhamba kusetyenziso oluqhelekileyo kuye ekujongeni iimpazamo.
Ukufumana iqonga apho unokuvavanya khona isicelo sakho ngokobungakanani bokufumana ingxelo esemgangathweni kuya kuqinisekisa ukuba ususa iqonga lakho kwicala elifanelekileyo, ukuphucula ukwamkelwa, kwaye ekugqibeleni kunciphise iindleko zentengiso kunye nophuhliso. Ihlombe linencwadi enkulu, Iindlela ezi-5 zokuphumelela ngokuZenzekelayo Ezo nkcukacha zinemida kunye neendlela ezilungileyo zovavanyo lokuzenzekelayo lwesoftware- qiniseka ukuyikhuphela.
Ukusebenza ngokuzenzekelayo koVavanyo lweApple kwiApple
Uvavanyo lokuzenzekelayo luquka:
Isakhelo esiZenzekelayo seApplause -Ikwakhiwe ziinjineli ezizisebenzelayo kwaye isekwe kwiilwimi ezihamba phambili kunye nezixhobo. Ukunyaniseka ngaphezulu kweminyaka yamava, isakhelo senza ukuba uvavanyo lwakho lweapp lusebenze ngokukhawuleza kwaye ligcine lusebenza nakweyiphi na indibaniselwano yeWebhu, i-iOS kunye ne-Android.
Baqhwabele izandla uluntu kuvavanyo -Iinjineli ezizisebenzelayo ezinamava eminyaka zisebenzela iinkampani ezinkulu zehlabathi. Abathengi be-automation babelwe iqela elizinikele ekuqinisekiseni impumelelo yakho elawula isakhelo, izixhobo, kunye nokudityaniswa, ukubhala iimeko zovavanyo kunye nezikripthi, nokongamela uvavanyo ngalunye. Hlala ukhululeke ngelixa sijonga impilo yeapp yakho.
Ukuzenzekelayo kwiDashboard -Ukuqonda kwangoko kwimpilo yokwakha i-app yakho yangoku kunye neyadlulayo. Zingaphi iibhugi esizityhilileyo, yeyiphi ipesenti yovavanyo oludlulisileyo, ngaba siyaphucula okanye siya sisiba mbi? Vula ideshibhodi kwaye ufumanise.
tags: ihlombeusetyenziso oluzenzekelayoukuvavanywa kwesoftwareIsoftware yokuvavanya usetyenzisoukuvavanywa kwesicelo esiphathwayoideshibhodi yokuvavanya
Jul 2, 2015 ngo-3: 06 PM
Xa kuziwa kwintengiso yeapps yeselfowuni, ukuzenzekelayo kubalulekile. Awunakulindela ukuba abantu bazibandakanye nawe ngesixhobo esiphathwayo ukuba awuthumeli ulwazi olufanelekileyo nolwenziweyo. Ngokuqinisekileyo ndicinga ukuba siza kubona uvavanyo oluzenzekelayo kungekudala, kulungile!